K: ပညာ နှင့် ညဏ်
ပညာ နှင့် ညဏ်
ပညာ နှင့် ဥာဏ်...
လူတယောက်ကို အမြင်ကတဆင့် အကဲဖြတ်ပေါင်းသင်းခြင်းသည် တရားမျှတပါရဲ့လား...
ကြုံဘူးတာပြောပြမယ်..ကိုယ့်မိတ်ဆွေအမကြီးတယောက်က..လူတွေကိုနိုင်ငံရေးအမြင် မရှိရင်..လူရာမသွင်းပါ..(အဟင်း..ကိုယ်နဲ့တော့တအား..ကီးကိုက်တယ်) သူပြောပြတာ..တခါ..သူအရမ်းခင်တဲ့သူငယ်ချင်းမတယောက်က...အာဇာနည်နေ့ရုံးပိတ်ရက်ကို ဘာနေ့မို့ပိတ်တာလဲလို့ ပြောမိလို့...သေခန်းပြတ်ခဲ့ပါသတဲ့။ ပြတ်သားပုံများ။
တခါတခါတော့လည်း...ကိုယ့်နဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်မတူ..စကားပြေခြင်းမတူပေမဲ့...တခြားတခြား သော..ကောင်းကွက်ကလေးတွေ..ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းကောင်းမူလေးတွေကြောင့် ပေါင်းသင်းခင်မင်နေရတဲ့..သူငယ်ချင်းများကခပ်များများ...
နောက်တော့မှ..ကိုယ်သဘောပေါက်တယ်...စင်ကာပူသတင်းမှာ..ဗမာပြည်အကြာင်းပြောရင်...ပုံဖိုင်အဟောင်းတွေအမြဲနဲနဲပြလေ့ရှိတာလေ...အထူးသဖြင့်..လူထုခေါင်းဆောင်..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချူပ်ချခံထားရကြောင်း..စသဖြင့်..နောက်ကြောင်းပြန်အကျဉ်းချူပ်တိုင်း...အဲဒီ..အင်္ကျီအ၀ါနဲ့ ကားပေါ်ကဆင်းလာပုံက..အမြဲပါပါနေကြကိုး...
Labels: Opnion , People
There are many dumb people in our country. But nobody shouldn't blame them, we have to look back where these people come from. Different background brings different people. And also his/her family circle makes him/her.
အင်းသတင်းတွေကို မဖတ်တတ်တဲ့ အတွက် ရှက်မိသွားပါပြီ
I like this article very much as it is based on the current events.
In reality, most of our next generation are working for money ONLY. Everybody is expected to enlighten them like your post.
it's sad..but true.
ကိုအောင်သာငယ်ပြောတာမှန်တယ် နောက်ပညာရေးအခြေခံ .. မသင်လို့မသိခဲ့တာကို သူတို့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူး အမရေ
ပညာနဲ့ ဥာဏ် အခါခပ်သိမ်းတွဲမနေသလို
ဥာဏ်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကလည်း အမြဲတွဲမနေဘူး
ကားမောင်းသင်တုံးက အဖြစ်လေး သတိရသွားတယ်။ သင်တဲ့ ဆရာက အသက် အစိတ်သုံးဆယ်လောက်။ ကိုယ့်ကို စလုံးမဟုတ်မှန်းသိသွားတော့ ဘယ်ကလဲမေးတယ်။ မြန်မာဆိုတော့ ဘယ်နားမှာ ရှိတာလဲတဲ့။ သူမသိဘူးတဲ့။ အံ့သြကုန်နိူင်ဖွယ် ဖြစ်သွားတယ်။ အထင်ကြီးလို့ လုံးလုံးမရတော့ဘူး။ ကြားဖူးတာ စလုံးမှာ ပထ၀ီတို့ သမိုင်းတို့ အခြေခံပညာမှာ မသင်ဘူးဆိုပဲ။ နောက်မှ ဟုတ်မဟုတ် ပြန်ရှာကြည့်ရဦးမယ်။